Rugta Ganacsiga Soomaaliya oo ku baaqeysa in la joojiyo Hindisaha Xil Ka Qaadista Madaxweynaha – Kalfadhi
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya ayaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, u soojeedisay inuu ka noqdo go’aanka uu ku qabtay Hindisaha Xil Ka Qaadista Madaxweynaha Soomaaliya, oo ay sheegeen iney ka dhex arkaan halis ka dhan ah dhaqaalaha iyo nolosha dalka.
War-saxaafadeed ay soo saartay eyey, sidoo kale, Rugtu ugu baaqday Xildhibaannada Golaha in ay dib uga laabtaan Mooshinkaas, “maadaama” bey yiraahdeen “ay wax u dhimeyso horumarka iyo geeddi socodka siyaasadda dalka”.
Waxay sheegeen in haddii Xildhibaannadda iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabku ay ku adkeystaan go’aanka ah sii wadista xil ka qaadista Madaxweynahaay taasi horseedi doonto iney wiiqdo dhaqaalaha iyo maalgashiga dalka.
“Waxaynu wada ognahay in haddii la waayo xassilooni siyaasadeed ay wax walba xumaanayaan, kalsoonida guud iyo aaminaadda maalgashi dibadeed oo dalka ka hirgashaana meesha ka baxayso” ayaa laguyiri War-saxaafadeedkooda
Rugtu waxay siyaasiyiinta iyo madaxda xilka haysa kulatalineysaa iney u turaan shacabka, si ay taas u sameeyaanna ay isu tanaasulaan,“si” bey yiraahdeen “uu dalku u gaaro meel ka wanaagsan meesha uu hadda joogo”.
“Waxay noola muuqataa in arrimahan deg-degga kusocda ay dalka gelin karaan, gaarsiinna karaan meel aad u liidata, rajada dib u soo kabashada dalkana ay ku keeni karto dhaawac aan kabashalahayn” ayey Rugta Ganacsiga Soomaaliya tiri.
Ma kulmi karaa Golaha Shacabka iyadoo ay Xildhibaannadu kala aragti duwan yihiin?